Ahoana ny fomba hifehezana ny kaontinao rehetra amin'ny tranokala tokana | Androidsis
Fampiharana Android mahatalanjona: Androany, Mooverang hifehy ny kaontinao rehetra amin'ny banky
Hiverina any amin'ny fizarana Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, sehatra iray izay andramana manangona ireo rindranasa heverinay fa mahaliana indrindra ho an'ny Android. Amin'ity tranga ity dia hanolotra sy hanome sosokevitra fangatahana hamela anay izahay fehezo ny kaonty banky rehetra avy aminay amin'ny Timeline tokana.
Ny anaran'ny fampiharana apetraka dia mamaly Mooverang, fampiharana izay maimaimpoana tanteraka ny serivisiny ary azonay amin'ny alàlan'ny Play Store an'i Google, fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android. Eto izahay dia milaza aminao izay rehetra misy fampiharana manaitra sy mahatalanjona ho an'ny Android afaka manao ho an'ny toekarem-pianakaviantsika.
1 Inona no atolotry Mooverang antsika?
2 Endri-javatra Mooverang
3 Fa azo antoka ve ny manome ny teny miafinao amin'ny rindranasa toa an'i Mooverang?
4 Ho mifanaraka amin'ny Mooverang ve ny bankiko na ny banky fitehirizako?
5 Best of Mooverang
6 Sintomy Mooverang
Inona no atolotry Mooverang antsika?
Mooverang, araka ny nambarako tao amin'ny fampidirana an'ity lahatsoratra ity, manolotra antsika ny fiasa tsy mampino ny fanangonana ny kaonty bankintsika rehetra amin'ny fampiharana iray hifehezana izay rehetra mitranga amin'ny volantsika syHifehy ny kaonty banky rehetra avy aminay amin'ny Timeline tokana.
Anisan'ireo fiasa na fiasa mampino an'i Mooverang azontsika atao ny manasongadina na manasongadina ireto hevitra manaraka ireto:
Midira amin'ny fampahalalana momba ny banky sy ny karatrao amin'ny toerana iray
Jereo ny hetsika rehetra ataon'ny toekarenao eo amin'ny fizotranao ary aza hadino ny hetsika rehetra.
Nahazo vola ve ianao? Nangataka komisiona taminao va ny bankinao? Nandany teti-bola ve ianao? Mampitandrina anao foana ny rindranasa momba ny vola miditra rehetra sy ny fandanianao mba hahafahanao mifehy ny volanao.
Ny varotra tsirairay dia voasokajy ho azy mba hahafantaranao ny alehan'ny volanao ary afaka manapa-kevitra hitahiry
Manampia naoty sy sary amin'ny fifanakalozana ataonao. Hanampy anao hifehezana bebe kokoa ny asanao io
Mividiana fivarotana an-tserasera mihoatra ny 200 miaraka amin'ny Offers mooverang ary mandoa vola amin'izany
Isaky ny faran'ny volana dia mandefa tatitra feno aminao i mooverang
Manana takelaka Excel izay nanoratanao ny fandanianao sy ny karamanao rehetra ve ianao? Hadinoy izany
Fampiharana toekarena manokana sy toekarena an-trano 100% maimaimpoana
Fa azo antoka ve ny manome ny teny miafinao amin'ny rindranasa toa an'i Mooverang?
Ny tena marina dia, na dia tsy dia tiako loatra aza ity karazana fangatahana hifehezana ny kaonty bankintsika rehetra ity, ny fiarovana izay atolotry Mooverang antsika dia eo an-tampon'ny enkripsi izay ampiasain'ny rindranasa ofisialin'ny orinasam-pandraharahana tsirairay izay fampiharana dia mifanaraka amin'ny. Énkripsi mahery vaika izay manivana ny angon-tsaintsika manokana amin'ny alàlan'ny sosona fiarovana marobe, Mooverang dia manome fiarovana be dia be antsika ka nandany ilay taratasy fanamarinana mitaky aza Norton antoka, ka mitafy ny tombo-kase amin'ny fampiharana mihitsy izay manome antoka fa azo antoka tanteraka ilay app.
Toy ny hoe tsy ampy amin'ny resaka fiarovana ny fampiharana, ny mitaky fifehezana ny orinasan-kaonty S21 Sec, orinasa iray manokana amin'ny fiarovana ny tambajotra miompana amin'ny fifehezana ireo sehatra banky.
Ho mifanaraka amin'ny Mooverang ve ny bankiko na ny banky fitehirizako?
Mazava ho azy Mooverang dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny bankyAnisan'ny malaza indrindra ananantsika American Express, Banco Caixa Geral, Banco Mare Nostrum (BMN), Banco Pastor, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander, Bancopopular-e, Banesto, Bankia, Bankialink, Bankinter, BBVA, Caja Castilla la Mancha (CCM), Caja Duero, Caja España ao anatin'ny lisitr'ireo fikambanana mifanentana lava azonao atao jereo mivantana avy ao amin'ny tranonkala Mooverang ofisialy.
Best of Mooverang
Ny tsara indrindra any Mooverang, ankoatry ny fampiasa amin'ny fahafahanao mifehy ny kaonty bankintsika rehetra amin'ny toerana iray dia manana izany isika ny fahafaha-manao izany amin'ny Android na iOS terminal na avy amin'ny solosaina manokana aza vao miditra amin'ny tranokala ofisialin'i Mooverang.
Zavatra iray hafa mahavariana momba ilay fampiharana, ankoatr'izay Timeline mahasoa izay anehoana antsika ny fihetsiky ny kaontinay rehetra, dia ny mety mandeha miantsena ary mandoa vola amin'ny fividianana natao. Tanteraka izany amin'ny alàlan'ny fividianana any amin'ireo magazay natolotry ny Mooverang, izay hamerina ny vola nampanantenaina amin'ny endrika kaonty virtoaly izay, raha irinay, dia azontsika atao ny mamindra ny vola miditra amin'ireo kaonty tena izy.
Raha fintinina, raha mpampiasa manana kaonty banky mihoatra ny iray ianao ary reraky ny manana fampiharana be loatra hifehezana ny harinkarena eto an-toerana dia manoro hevitra anao aho mba hialana amin'izy ireo ary hisafidy ireo fiasa goavambe atolotray antsika Mooverang ho an'ny Android, iOS na koa ny solo-sainao manokana.
Para sintomy eto ny rindranasan'ny Mooverang.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fampiharana Android mahatalanjona: Androany, Mooverang hifehy ny kaontinao rehetra amin'ny banky
Tetikasa Soli mahaliana an'i Google miaraka amina radara kely hahafantarana ny fihetsiky ny tanana
ASUS dia nanambara ny ZenWatch 2, ZenFone Selfie ary ny takelaka ZenPad